Toogasho Dhimasho iyo Dhaawac Sababtay Oo Ka Dhacday Xarunta Shirkadda Youtube.
Wednesday April 04, 2018 - 09:38:40 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in toogasho khasaara dhimasho iyo dhaawac ah sababta ay ka dhacday mid kamida gobollada ugu waaweyn wadankaasi.
Ugu yaraan hal qof ayaa dhintay afar kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii ruux hubeysan uu toogasho ka geystay xarunta mid kamida shirkadaha ganacsiga ugu waaweyn wadanka Mareykanka, saraakiisha Booliska ayaa sheegay in toogasho ka dhacday xarunta shirkadda Youtube ee magaalada San Faransiisko gobolka Califirnia ay ku dhaawacmeen afar qof oo mid kamida xaaladdiisa caafimaad ay aad uliidato.
Taliyaha Booliska California ayaa warbaahinta u sheegay in rasaas xooggan lamaqlay xilli dadka la toogtay ay ku sugnaayeen goob lagu cunteeyo, Meydka haweenay ayaa goobta lagu arkay waxaana loo malaynayaa in ay aheyd qofka toogashada geystay kadibna ay isdishay.
"dhawaqa rasaas xooggan ayaan ka maqalnay dhismaha shirkadda Yotube taas oo cabsi iyo walaac ku abuurtay shaqaalaha shirkadda ee dhismaha ku sugnaa waqooyiga Saan Faransiisko" sidaas waxaa yiri goob jooge ku sugnaa goobta wax ka dhaceen.
shabakadda CBS News ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa faafisay muuqaallo muujinayay Tobanaan qof oo uu sii firxanaya dhanka xarumaha Booliska sababa laxiriirta cabsi ay ka qabeen in waxyeello kasoo gaarto toogashadu ka dhacaysay goobta, diyaaradaha qumaatiga ukacaya ayaa goobta gaaray wuxuuna muuqaalku u ekaa goob dagaal.
Isbitaalka Magaalada Saan Faransiisko ayaa sheegay in dadka toogashada ku dhaawacmay mid kamida xaaladdiisa caafimaad ay aad uliidato toogashooyinka khasaaraha dhaliyo ayaa bilihii lasoo dhaafay kusoo kordhayay wadanka Mareykanka.
Isbuucii lasoo dhaafay shacabka Mareykanka ayaa dhigay dibad baxyo ballaaran oo Boqolaal kun qof ay ka qeyb galeen waxaana looga cabanaya hubka bulshada gacamaha ugu jira ee bil walba sababa khasaara dhimasho iyo dhaawac badan ah.
Hoggaamiyaha Mareykanka Donald Trump ayaa horay u sheegay in uu sii xoojinayo sharciyada heysashada hubka arrinkaas oo sare usii qaadaysa dhimashada ka dhalanaysa toogashooyinka badanaa ka dhaca wadanka mareykanka oo kumanaan qof ay sanadkiiba ku dhintaan
Dad American ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ka Noqday Toogasho ka dhacday Magaalada Saan Faransiiko ee wadanka Mareykanka
Ciidamada Kenya oo burburiyay xarunta Shirkadda Hormuud ee deegaanka Jaldeys.